NISA oo kordhisay dhibaatada ay ku heyso Ganacsatada Muqdisho . | KEYDMEDIA ONLINE
NISA oo kordhisay dhibaatada ay ku heyso Ganacsatada Muqdisho .
Ganacsatadan ayaa tilmaamay, in xaaladdooda ay sii adkeyneyso, aamusnaanta dowladda hoose ee xamar oo ay ka yihiin canshuur bixiyayaal, waxanna tan fajaca ku noqotay ay tahay lacagta canshuurta ka baxsan ee ay ragaasi rabaan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamo katirsan Nabad Sugida Soomaaliya ee NISA, ayaa billaabay bilihii u danbeeyey in ay dhibaateeyaan dadka leh ganacsiga yar-yar, gaar ahaan kuwa waratada ah iyo qaarka leh dabakayooyinka.
Ciidamadan ayaa dadkaasi nolosha maalin laha ka raadinaya ganacsiga yar yar weydiisanaya lacago baad ah oo dhan $30 dollar, waxaana qofkii bixin waaya ay ugu hanjabaan inay ka bur burin doonaan goobtiisa ganacsi ee ku raadsado nolosha Carruurtiisa, iyagoo ku andacooyonaya in dukaankiisa laamiga dhiniciisa ku yaalla uu caqabad ku yahay isku socodka.
Qaar badan oo kamid ah ganacsatada, oo ku sugan Suuqa Bakaaraha ayey ilaa hadda ka bur-buriyeen goobahoodii ganacsi, iyagoo bililiqeystay agabkii kala duwanaa ee u saarnaa miiska ama dabakaayada ay ku shaqeysanayeen.
Dadka meheradahooda ganacsi la bur buriyey oo qeyb ka mid ah KON la hadlay, ayaa niyad-jab ballaaran ka muujiyey hab dhaqanka Ciidanka NISA, iyagoo xusay inay dhibaatada ku wargeliyeen Maamulka Gobolka Banaadir, balse aysan jirin cid ka jawaabtay Cabashadooda.
Ganacsatada ayaa tilmaamay in xaaladdooda ay sii adkeyneyso, aamusnaanta dowladda hoose ee Xamar oo Canshuur ay siiyaana ay qalbiga ka jebisay, waxayna ku noqotay caqabad.
Dhibaatadda oo markii hore ku ekeyd Suuqa Bakaaraha, ayaa hadda soo gaartay Isgoyska Seybiyaano, halkaasoo kamid ah goobaha ay ku badan yihiin dadka leh ganacsiyada yar yar, waxaana laga sameeyey howlgallo lagu bur-burinayo dhowr ganacsi, kadib markii dadkii lahaa ay awoodi waayeen bixinta lacagta baadda ah ee $30-ka dollar bil walba.
Dadkan leh ganacsi oo qaar ka mid ah ay Keydmedia Online xiriir la sameysay ayaa sheegay in aysan awoodin lacagtaasi, maadaama ganacsigoodu uu yahay mid aad u yar, waxaana badadankood ay inoo sheegeen inay isku dhigmaan qiimaha agabka ay ka ganacsadaan iyo lacagta la weydiinayo bil walba in ay bixiyaan.
Si kastaba, walbahaarka heysta ganacsatadan yaryar ee laamiga dhiniciisa ku ganacsada Muqdisho, ayaa ah mid sii kordhaysa, waxaana arrintan guracan ay noqoneysaa mid shaki badan galisa nolol maal-meedka qoysaska danyarta ah, ee ku tiirsanaa shilimaadka yar ee laga helo ganacsiga yar-yar.
0 Comments Topics: nisa soomaaliya